एमालेको महाधिवेशन स्थलमा कसरी आइपुग्यो जिवित गैंडा ? - हिमाली पत्रिका	एमालेको महाधिवेशन स्थलमा कसरी आइपुग्यो जिवित गैंडा ? - हिमाली पत्रिका
एमालेको महाधिवेशन स्थलमा कसरी आइपुग्यो जिवित गैंडा ?
हिमाली पत्रिका प्रकाशित मिती - १२ मङ्सिर २०७८, आइतवार
चितवन । नेकपा (एमाले)को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र सौराहामा जारी छ । आगामी नेतृत्व सर्वसम्मतबाट आउने कि चुनावबाट भन्नेमा अझै अन्यौलपूर्ण छ । आज आइतबार निर्वाचन हुने भनिएकोमा अझै पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन ।